SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်မှု သတင်းများနှင့် ဓါတ်ပုံများ
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်မှု သတင်းများနှင့် ဓါတ်ပုံများ
ယခုလ၁၇ရက်နေ့က မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ရေဒီယိုတို့မှ ည၈နာရီ သတင်းတွင် အကျဉ်းသား ၇၁၁၄ ယောက်လွတ်ပေးသည်ဟု ကြေငြာသွားခဲ့ပြီး နောက်တနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်းရှိ အကျဉ်းထောင်များမှ ပုဒ်မ ၁၇/၁ နှင့် အရေးပေါ်စီမံချက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅(ည)တို့ဖြင့် ဖမ်း ဆီးထားသူ စုစုပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကို ပြန်လွှတ် ပေးမည်ဟု အင်းစိန် အကျဉ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်းက သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအထိ လွတ်မြောက်လာသူများ စာရင်းကို 8888 people power မေးများမှပေးပို့ချက်ကို ဖေါ်ပြပေး လိုက်ပါသည်။
ထိုအတူ သတင်းဌာနများမှ ရေးသားချက်များနှင့် ပြည်တွင်းသတင်းထောက်များမှ ပေးပို့သော ဓါတ်ပုံအချို့ကိုပါ ဖေါ်ပြ ပေးလိုက်ပါသည်။
Political Prisoners Release in Burma, Sep 18, 2009
The Burmese military regime announced on Sep 17 that it will release 7114 prisoners from prisons around the country. U Zaw Win, Director of the regime’s Prison Department spoke to journalists gathering in front of Insein Prison today that at least about 250 prisoners who were imprisoned for security reasons would be included in the release. So far, I can confirm the release of 54 political prisoners below, based on various sources, including AAPP, NLD (LA) and Burmese radio services. Two MPs, two monks and three journalists are included.
13. Shin Sandaw Batha (Monk)
မျိုးချစ်သူ / ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉
“တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ ၅ (ည)၊ ၁၇၊ ၁၃၊ ၂၀ စသည့်အမှုတို့ဖြင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကစပြီးတော့ လွှတ်ပေးနေမှာပါ။ မနေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ အမိန့်အတိုင်းပါပဲ။ လွှတ်ပေးမယ့်လူဦးရေ (၇,၁၁၄) ဦး....”အပြည့်အစုံသို့
အကျဉ်းသား ၇၀၀၀ ကျော်လွှတ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၄၀ ကျော်ပါဝင်
စစ်အစိုးရက ယနေ့ စတင်၍ အကျဉ်းသား ၇၁၁၄ ဦးကို လွှတ်ပေးရာတွင် သတင်းထောက်များ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၄၀ ကျော်သာ ပြန်လည် လွှတ်ပေး လိုက်ကြောင်း
အစိုးရ လွှတ်သည့် ၇၀၀၀ တွင် အင်းစိန်ထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀ ၀န်းကျင် ပါဝင်
စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၉
နာဂစ် ဒုက္ခသည်များကို ကူညီစဉ် အဖမ်းခံရသည့် အီကိုဗီးရှင်း ဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် မအိမ့်ခိုင်ဦး (ဓာတ်ပုံများ-မိုးမခ)
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ အကျဉ်းထောင်များမှ အကျဉ်းသား ၇၀၀၀ ကျော် လွှတ်ပေးမည်ဟု စစ်အစိုးရက ကြာသပတေးညက ကြေညာခဲ့သော်လည်း သောကြာညနေပိုင်းအထိ ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်ထောင်မှ လွတ်လာသူများထဲတွင် နိုင်ငံရေး နှင့် ဆက်နွယ်သူ ဦးရေ ၂၀ ခန့်သာ ပါရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
A Burmese cameraman receives "Amnesty"
ထောင် ၂၁ နှစ်ကျသည့် ဗီဒီယိုရိုက်သူ
လွတ်ရက်စေ့ချိန်တွင် “လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်” ရ
ထောင်သက် ၂၁ နှစ် ရှိပြီး လွတ်ရက်စေ့ချိန်တွင် အစိုးရ၏ "လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်" ဖြင့် ထောင်အပြင်သို့ ရောက်လာသူ ဦးဝင်းမြင့်။ သူ၏ ဗီဒီယို ရိုက်ချက်များကို အစိုးရက ၀ါဒဖြင့်ချိရေးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ဖူးသည်။ (ဓာတ်ပုံ-မိုးမခ)
voices of freed persons
မူလ အလုပ်အကိုင်များ ပြန်လည်မည်ဟု ထောင်မှ လွတ်လာသူ ၂ ဦး ပြော
Posted by saffrontoward at 9:45 AM